वाचको किन छ यति धेरै चर्चा ? - सुनाखरी न्युज
वाचको किन छ यति धेरै चर्चा ?
Posted on: May 4, 2022 - 11:17 am
। गुगल पिक्सेल वाच विगत केही हप्तादेखि चर्चामा छन । गुगलका सीईओ सुन्दर पिचाईले गुगल आई/ओ २०२२ कार्यक्रममा पहिलो गुगल स्मार्टवाच लन्च गर्न सकिने संकेत गरिसकेका छन् । यो गुगल कार्यक्रम मे ११ र १२ मा हुने छ ।
गुगल वाचको लन्च मिति नजिकिँदै गर्दा, यसको स्पेसिफिकेशन र फिचरहरू अगाडि आउँदैछन् । यद्यपि गुगलले आधिकारिक रूपमा आफ्ना सुविधाहरू सार्वजनिक गरेको छैन । पिक्सेल वाचको डिजाइन, यसको गोलाकार डायल र स्वामित्व स्ट्रिपहरू पहिले नै झल्किएका छन् । ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्दा, यसमा ३०० एमएएच ब्याट्री पाउन सकिन्छ र यो सेलुलर कनेक्टिभिटी विकल्पमा आउन सक्छ ।
वेबसाइटले Google Pixel Watch लाई मोडेल नम्बरहरू GWT9R, GBZ4S र GQF4C सँग तीन फरक भेरियन्टहरूमा सूचीबद्ध गरेको छ । यसमा ब्लुटुथ भी ५ टू जडान उपलब्ध छ । स्मार्टवाचको नवीनतम संस्करण RWD7 को सट्टा सफ्टवेयर संस्करण नम्बर RWD5.211104.001 सँग सूचीबद्ध छ । एजेन्सी
अबदेखी सवारी आवागमनमा असर पार्ने गरी विज्ञापन गर्न नपाइने